သင်ခန်းစာ အမှတ် (၁၇) မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာ
ပထမနှစ်သင်ခန်းစာဖြစ်သော သင်ခန်းစာအမှတ် (-)တွင် အသင်းတော်အားချီဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျယ်တ၀င့်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ချီဆောင်ခြင်းသည်ယုံကြည်သူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ်ရာဖြစ်သော် လည်း တိတု ၂း၁၁-၁၃တွင် ရှင်ပေါလုကကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်တည်းဟူသော ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသော အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို “ငါတို့သည် မျှော်လင့်လျှက်မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာ ….”ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ ခရစ်တော်သည် မိမိသန့်ရှင်းသူများအတွက် သန့်ရှင်းသူများနှင့်အတူ အောင်ခြင်းနှင့် ကြွလာတော် မူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို မင်္ဂလာအခါသမယထဲမှ အချို့သောအစိတ် အပိုင်းတို့ကို ချန်လှပ်ထားသည်မှန်သော်လည်း ယုံကြည်သူတိုင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကို သင်ခန်းစာတွင်လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဧဖက် ၂း၁၂တွင် ဧဖက်အသင်းတော်အားရှင်ပေါလုက “ထိုအခါသင်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုမသိ မျှော်လင့် ခြင်းမရှိ၊ လောက၌ဘုရားမဲ့နေကြသည်”ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးတွင် ကုဋေပေါင်းများ စွာသောလူတို့သည် မျှော်လင့်ရာမရှိ။ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်လျှက်ရှိနေပါသည်။ ခရစ်ယာန်များနေထိုင်ရာ အမေရိ ကန်ပြည်၌ပင် မြောက်မြားစွာသော လူတို့သည် သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရာ၌ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိ၊ သူတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်စားမည်ဟု မျှော်လင့်ချက်မရှိ၊ အကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်သာ ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ သု ၁၁း၇ တွင်“ဆိုးသောသူသည် သေသောအခါ မျှော်လင့်ခြင်းပျက်တတ်၏ “လူသည် မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသ၍ အသက်ရှင် ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းများပြုလုပ်နေနိုင်ပါသည်။ ၁သက် ၄း၁၃တွင် “ညီအစက်ိုတို့ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသော အခြားသူတို့သည် ၀မ်းနည်းသကဲ့သို့၊ ၀မ်မနည်မည့်အကြောင်း”ဟုဖော်ပြသော ကျမ်းချက်သည် သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်သူအတွက်၊ မည်မျှကောင်းမြတ်သောသတင်းကောင်းဖြစ်ပါသနည်း။ သေခြင်းကိုအောင် မြင်၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်၊ ရှေ့အနာဂတ်တွင်ရရှိမည့် ဘုန်းကျက်သရေအတွက်မျှော်လင့်ချက်၊ ကောင်းကင်ဘုံဝင်စားရန် မျှော်လင့်ချက်များ သည်အသစ်တဖန်မွေးဖွားစေခြင်းကိုရရှိပြီးသူတိုင်း၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ ရှိနေသော မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော် နှင့်အတူနေရလျှက် ခရစ်တော်ကို မိမိမျက်စေ့ဖြင့်မြင်ရမည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်ရရှိမည့်မျှော်လင့် ချက်၊ အိမ်အသစ်ရရှိမည့်မျှော်လင့်ချက်၊ အသက်သစ်ရမည့်မျှော်လင့်ချက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့ရောက်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်များလည်းရှိပါသည်။ ထိုမျှော်လင့်ခြင်းကို မင်္ဂလာရှိသော(၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ဘွယ်) မျှော်လင့်ရာဟု ခေါ်ဆိုထားခြင်းမှာ အံ့သြစရာဟုတ်ပါ။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ထိုမျှော်လင့်ချက်အလားအလာများကို လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါ သည်။
၁။ ထိုမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ခြင်း၏ သေချာမှု။
(က) ခရစ်တော်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအထောက်အထား။ “ခိုင်ခန့်သော သက်သေများ အားဖြင့်ပြတော်မူ၏” တ၁း၃။ ရော ၁း၎။ ဗျာ ၁း၁၈။ သင်ခန်းစာ (၄)ကိုပြန်လည်သတိပြုပါ။
(ခ) ခရစ်တော်တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတွင် အလုံအလောက်ဖော်ပြထား ခြင်း-
(၁) ခရစ်တော်တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်းဖ်ာပြသောကျမ်းချက် ၃၁၇ ကြိမ်တွေ့ ရခြင်း။
(၂) ကျမ်းပိုဒ် (၂၅)ပိုဒ်လျှင်၊ တစ်ပိုဒ်နှုန်းဖြစ်နေခြင်း။
(၃) သက်သာလောနိတ်သြ၀ါဒစာ ပထမစောင်၊ ဒုတိယစောင်နှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတို့ တစ်အုပ်လုံး မှဖော်ပြနေခြင်း။
(ဂ) ပရောဖက်များတို့မှ ကြိုတင်ဟောပြောထားခြင်း။
ဟေရှာ - ၄၀း၁၀။ “ကြည့်ရှုလော့၊ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ကြီးစွာသောတန်ခိုးနှင့် ကြွလာ၍”
ဇာခရိ ၁၄း၅၊ ၉ တွင် “ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကြွလာတော်မူ၍ မိမိသန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ သည်ပါလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် မြေတပြင်လုံးတွင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်”
ဆာ ၂၄း၉။ “အချင်းတံခါးတို့၊ တံခါးမုတ်တို့၊ ကြွလိုက်ကြ၊ အချင်းထာဝရတံခါးတို့ ကိုယ်ကို ကြွလိုက်ကြ။ ဘုန်းကြီးသော ရှင်ဘုရင်ဝင်တော်မူမည်”
မှတ်ချက်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော ကြိုတင်ဟောပြောချက်များသည် ခရစ်တော် မြေကြီးပေါ်သို့ တဖန်ကြွလာတော်မူမည့်အကြောင်းနှင့် ဣသရေလလူမျိုးများတွက်၊ အနာဂတ်ကာလတွေ့ရမည့် ဘုန်းအသရေကို ဖော်ပြသကဲ့သို့ ထိုဘုန်းအသရေများကို အသင်းတော်ခေတ်ယုံကြည်သူများသည် ဣသရေလလူတို့နှင့်အတူ မျှဝေအောင်မြင်ခံစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပြတ်သားစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ရော ၈း၁၇။ ကော ၃း၎။ ဗျာ ၅း၁၀။
(ဃ) ကတိတော်များပေးရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော စကားလုံးများ -
(၁) ယော၊ ၁၄း၃။ “ငါသည်သွား၍ … တဖန်ပြန်လာ၍”
(၂) ၁သက် ၄း၁၆။ “ဘုရားသခင်သည်…. ကောင်းကင်ဘုံမှ ကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍”
(၃) တ၊ ၁း၁၁။ “ထိုယေရှုသည် .. တဖန်ကြွလာတော်မူလတံ့”
(၄) ဟေ ၉း၂၈။ ခရစ်တော်သည် နောက်တဖန် ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လျှက်နေသော သူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ .. ပေါ်ထွန်းတော်မူလတံ့။
မှတ်ချက်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုရေးသော စာရေးဆရာများသည် ဤကိစ္စကိုမလွဲမသွေအမှန်ဖြစ် သည်ဟုခံယူထားပါသည်။ ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာမည်ဟု အသေအချာကြေညာထားပါသည်။
(င) အဖြစ်အပျက် (၂)ခု၏ ခြားနားမှု။
(၁) လု ၂း၇ ကို ၂၁း၂၇ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
(၂) မ၊ ၁း၂၁ကို ၂၄း၃၀ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုလုံးကို ရှင်းလင်းစွာမြင်ရပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် အ၀တ်နှင့် ပတ်ရစ်သောကလေးသူငယ်အဖြစ်နှိမ့်ချစွာကြွလာခဲ့ပြီး။ ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော် တော်နှင့် ကြွလာတော်မူမည်။
(၁) ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်။ ယော ၁၄း၃ “ငါသည် တဖန်လာပြန်၍”
(၂) ကောင်းကင်တမန်၏ သက်သေခံချက်။ တမန် ၁း၁၁။
(၃) တမန်တော်၏ သက်သေ။ ၁ သက် ၄း၁၆။ “သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင် ကြွလာတော် မူမည်”
မှတ်ချက်။ ။ သခင်ယေရှုကြွလာတော်မူခြင်းသည် အောက်ပါအကြောင်းအရာများမဟုတ်ပါ
(၁) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြွလာခြင်း။ (အချို့တို့က ခရစ်တော် ကြွလာခြင်းဟုပြောပါ သည်။)အမှန်အားဖြင့် တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူမည့်အကြောင်း ကြိုတင်ပြောထားချက်များ သည် ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့နောက်မှ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေရန်ကြွလာခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်တော်နှင့်အတူရှိရန်လာခေါ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂) သေခြင်း (သေခြင်းသည် ကြွလာခြင်းမဟုတ်ပါ)။ သေခြင်းတွင် တံပိုးခရာမှုတ်ခြင်းမရှိပါ။ ကောင်းကင်တမန်မင်းအသံပေးခြင်းမရှိပါ ကိုယ်တော်နှင့် အတူရှိမည့်အကြောင်း ချီဆောင် ခြင်းမခံရပါ။
(က) အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်း။ ၁ပေ ၁း၃“အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းငှာ .. ငါတို့ကိုတစ်ဖန်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသော” ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ အသက်ရှင်နေသောကြောင့် အသက်ရှင်လျှက်ရှိသည်။ ဂလာ ၂း၂၀။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှောင်လင့်ခြင်းသည်“ကမ္ဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်သူကို မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ခ) မြဲမြံခိုင်ခန့်သော မျှော်လင့်ခြင်း၊ ဟေ ၆း၁၉။ “ထိုမျှော်လင့်ခြင်းမူကား၊ ကုလားကာအတွင်း၌ ချ၍မြဲမြံ ခိုင်ခန့်သော စိတ်နှလုံး၏ကျောက်ဆူးကဲ့သို့ငါတို့၌ ရှိသတည်း” ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ခြင်းသည် မပျက်စီး တတ်သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၌ ကျောက်ဆူးချထားပါသည်။ မုသားမပြော သောဘုရားသခင်၏ ကျိန်တော်မူခြင်းကတိတော်ဖြင့် အတည်ပြုထားပါသည်။ ဟေ ၆း၁၇၊ ၁၈။
(ဂ) ဘုန်းအသရေကို မျှော်လင့်ခြင်း။ ကော ၁း၂၇။
“ဘုန်းအသရေကိုမျှော်လင့်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့အထဲ၌တည်တော်မူသော ခရစ်တော်ပေ တည်း။ “ငါတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ဘုန်းအသရေတော်ရှေ့၌မြင်ရကြမည်။ ယုဒ ၂၄။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်တူကြမည်။ ၁ယော ၃း၂။ ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတော်နှင့် ကောင်းကင်စည်းစိမ်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အမွေခံကြရမည်။ ရော ၈း၁၇-၁၈။ ဖိ ၃း၂၁။
(ဃ) သန့်ရှင်းစေသောမျှော်လင့်ခြင်း။ ၁ယော ၃း၃။
“ထိုသို့မျှော်လင့်သောသူမည်သည်ကား.. ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေတတ်၏” ခရစ်တော်သည် အမှန်ကြွလာ တော်မူည်ဟူသော ခိုင်မာသည့်အကြောင်းအရာအပေါ် မျှော်လင့်ချက်ထားခြင်းကဲ့သို့ မည်သည့်အရာကမျှသန့်ရှင်းခြင်း မပေးနိုင်ပါ။ ၁ယော ၂း၂၈။ တိ ၂း၁၁-၁၂။
(င) သက်သာစေသော မျှော်လင့်ခြင်း။ ၁သက် ၄း၁၈။
“ဤစကားများအားဖြင့် အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သက်သာစေကြလော့” ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်စုံခြင်းများအတွက် ဤစကားထက်သက်သာစေနိုင် သောစကားမရှိတော့ပါ။ ၁သက် ၅း၁၀-၁၁။
(စ) မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ခြင်း။ တိ ၂း၁၁။
“ငါတို့သည် မျှော်လင့်လျှက်” (၁၃)မင်္ဂလာဆိုသည်မှာ “၀မ်းမြောက်ခြင်း”ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့၌ထားရှိသောအရာများသည် မည်မျှဝမ်း မြောက်ဘွယ်ကောင်းပါသနည်း။
(၃) ထိုမင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ခြင်း၏ အကျိုး
ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့် (ဧ ၂း၈-၉)ကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်စားမည့်သူ မည်သူကမျှ အကျင့်သီလ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ် အနည်းအများအားဖြင့် ၀ယ်ယူလဲလှယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ သခင်ဘုရားကိုကိုးစား၍ သခင်ဘုရား၏ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သောသူတို့အတွက် အဖိုးမဖြတ် နိုင်သော ဆုလက်ဆောင်များကိုပြင်ဆင်ထားလျှက်ရှိပါသည်။ ဗျာ ၂၂း၁၂၊ ကတိထားတော်မူသော အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်၏ ထာဝရနိုင်ငံတော်ထဲသို့ ၀င်စားခြင်း အခွင့်ကို ကြွယ်ဝစွာပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ရှင်ပေတရုက ရေးသားထားပါသည်။ ၂ပေ ၁း၁၀-၁၁။ ထို့ပြင် ရှင်ပေါလုက ၁ကော ၃း၁၄တွင် “အကြင်သူ၏ အလုပ်သည်မြဲ၏။ ထိုသူသည် အကျိုးကိုခံရ လတံ့”ဟုဆိုရာတွင် ရှင်ပေတရုနှင့်သဘောခြင်းတူညီနေပါသည်။
(က) ဓမ္မသရဖူ။ ၂တိ ၄း၈။ ယခုမှစ၍ ဓမ္မသရဖူသည် ငါ့အဘို့ သိုထားလျှက်ရှိ၏။ ထိုနေ့ရက်၌ တရား သဖြင့်စီရင်သောသူတည်းဟူသော သခင်ဘုရားသည် ထိုသရဖူကို ငါ့အားပေးတော်မူမည်။ ထိုမျှမက ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကို တောင့်တသောသူအပေါင်းတို့၌လည်း အပ်ပေးတော်မူမည်။ ဤ လောကတွင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောသူတို့အတွက် ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါ သည်။ အငယ်(၇)တွင် နမူနာ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူမည်ကို မျှော်လင့် သောအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတို့အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) အသက်သရဖူ ဗျာ ၂း၁၀။ “သေသည့်တိုင်အောင် သစ္စာစောင့်လော့။ သို့ဖြစ်လျှင် အသက်သရဖူ ကို ငါပေးမည်။ “ခရစ်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသောအားဖြင့် မည်ကဲ့သို့သော စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို မဆိုကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်သောသူတို့အတွက် ဤသရဖူကို ကတိပြုထားပါသည်။ ယာ ၁း၁၂။ ထိုသူတို့သည် “သေသည့်တိုင်အောင်”ဟု ဆိုသောကြောင့် သာမန်သေခြင်းဖြစ်စေ၊ မာတုရအဖြစ် အသေဆိုးဖြင့်သေခြင်းဖြစ်စေ ခံရနိုင်ပါသည်။ ကောင်းမြတ်သောကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောအသက်သရဖူသည် ထိုသူတို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားလျှက်ရှိပါသည်။
(ဂ) မညှိုးနွမ်းမပျက်စီးနိုင်သောသရဖူ။ ၁ကော ၉း၂၅။
ပေါလုရည်ညွှန်းထားသော ပျက်စီးတတ်သည့် သရဖူများကို အားကစားသမားများကသာ ရယူနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမပျက်စီးနိုင်သောသရဖူသည် “ပန်းတုံးတိုင်သို့လိုက်ပြေး”သောသူများ ဖိ ၃း၁၄။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်၍ ကောင်စွာသော တိုက်လှန်ခြင်းကိုပြုသောသူများ၊ ၁တိ ၆း၁၂။ ထုံးတမ်း အတိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်သောသူများ ၂တိ ၂း၅။ ဟေ ၁၂း၁-၂ တို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) ဘုန်းကြီးသောသရဖူ၊ ၁ပေ ၅း၎။ စေတနာစိတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာရှိစွာလည်းကောင်း အသင်းတော်ကိုကြည့်ရှုလျက်၊ သိုးတို့ကိုပြုစုကျွေးမွေးသောအသင်းတော်ခေါင်းဆောင် (သို့) သိုးထိန်း၊ သင်းအုပ်တို့အတွက်ဤသရဖူသည် စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိနေပါသည်။ (အငယ် ၁-၃)
(င) ၀ါကြွားခြင်း၏သရဖူ။ ၁သက် ၂း၁၉။ “ငါတို့မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း ငါကြွားခြင်း၏ ဦးရစ်သရဖူကား၊ အဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာနည်း။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ် ကြွ လာတော်မူသောအခါ ရှေ့တော်၌ သင်တို့သည် ထိုသို့သောအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်မဟုတ် လော” ပေါလုသည် သက်သာလောနိတ်အသင်းတော်ကို ရယူသောသူ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤသရဖူ သည် ၀ိညာဉ်ကယ်တင်သူများ၏ သရဖူဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်သားအား ခရစ်တော်ထံသို့ ပို့ဆောင် သောသူတိုင်းအတွက် မင်္ဂလာရှိသော လက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်။
(စ) အမှန်အားဖြင့်ပြောရလျှင် အသင်းတော်ကို ချီဆောင်တော်မူသောအခါ အသင်းတော်နှင့်အတူ ချီဆောင်ခံရခြင်း။ ၁သက် ၄း၁၇။ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲ၍ မျက်စေ့တမှိတ်လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်း ကိုယ်တော်နှင့်တူသော အဖြစ်သို့ရောက်ရခြင်း။ ၁ကော ၁၅း၅၁။ ဖိ ၃း၂၀-၂၁။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထာဝရကာလနေရခြင်း။ ယော ၁၄း၃။ ဘုန်းအသေရေတော်ကို ၀င်စားခြင်း၊ ရော ၈း၁၇၊ ၁၈။ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းတွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံခွင့်ရရှိခြင်း။ ဇာခရိ ၁၄း၉။ ဗျာ ၅း၁၀တို့ကိုလည်း ယုံကြည်ခြင်း ၏ဆုလာဘ်အဖြစ် ရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဆ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သောအချက် (၂)ချက်
(၁) “သင်၏သရဖူကိုအဘယ်သူမျှမယူစေခြင်းငှာ၊ ရခဲ့ပြီးသောအရာကိုစွဲကိုင်လော့။” အစဉ် သတိပြု နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗျာ ၃း၁၁။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသရဖူများနှင့် ထိုက်တန်သူများမဟုတ်ကြောင်းကိုသိလျှက် ထိုသရဖူ များကို သခင်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်းပလ္လင်တော်ရှေ့၌ ချထားကြမည်ဖြစ်သည်။ ဗျာ ၄း၁၁။
(၄) မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာ၏ လက္ခဏာသက်သေများ။
(က) ကျမ်းစာ၌ရေးထားသောအချက်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးသေဆုံးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်ကြွလာမည်ဟူသော ကျမ်းချက် သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်ပါ။ ခရစ်တော်ကြွလာသောအခါ ကိုယ်တော်တိုင်ငါမြင်ရမည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ပါမည်ကျမ်းချက်အတိုင်းဖြစ်မည်။ ငါသည်တစ်ဖန်ပြန်လာ၍ ယော ၁၄း၃။ ထိုယေရှုသည် …. တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူလတံ့။ တ၊ ၁း၁၁။
“ကိုယ်တော်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍” ၁သက် ၄း၁၆။
(ခ) သေချာရေရာသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာဖြစ်ပေါ်မည်။ အချိန်ကို မျှော်လင့်လျှက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြရန် ခရစ်ယာန်တိုင်းတို့အား တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ဟေဗြဲ ၉း၂၈။ ၁သက် ၁း၁၀။ ၅း၆။ ဖိ၊ ၃း၂၀။ တိ၊ ၂း၁၃။
(ဂ) မမျှော်လင့်နိုင်သောအချိန်တွင်ဖြစ်မည်။ ထိုအချိန်သည် ကြိုတင်မှန်းဆ၍မရသောအချိန်ဖြစ်လျှက် အလျင်အမြန်ချက်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာသည် ထာဝရကာလအတွက် ဖြစ်သော်လည်း ထိုအရာ၏ ပြည့်စုံခြင်းသည် မျက်စေ့တမှိတ်၌ “၁သက် ၅း၂-၃” သူခိုးသည် ညဉ့် အခါလာသကဲ့သို့” မ၊ ၂၄း၂၇။ လျှပ်စစ်သည် အရှေ့မှပြက်၍ အနောက်တိုင်အောင် ထွန်းလင်းသကဲ့သို့”
(ဃ) နှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ ခရစ်တော်ဤလောကသို့တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူမည့်အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်း စာသည် ဖော်ပြရာတွင်နှစ်ပိုင်းပါဝင်နေသည်ဟု သတိပြုရပါမည်။ ပထမပိုင်းတွင်ကိုယ်တော်သည် အသင်းတော်အား ချီဆောင်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြွလာတော်မူသည်။ ၁သက် ၄း၁၆၊ ၁၇။ ယော ၁၄း၃။ ထို့နောက် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဆင်းသက်တော်မူသည်။ ထိုအခါ ကြီးစွာ သောဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်အားဖြင့် ကြွလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗျာ၊ ၁၉း၁၁-၁၅။ ယုဒ ၁၄။ ကော ၃း၎။
(၁) ကြွလာတော်မူခြင်း၏ ပထမပိုင်းတွင် ခရစ်တော်သည် မိုးတိမ်ကိုစီးလျှက်၊ မိုးတိမ်အထိကို သာဆင်းလာပြီးအသင်းတော်ကို ကမ္ဘာမြေကြီးမှ တခဏအတွင်းချီဆောင်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ခိုင်လုံလှပါသည်။ ၁သက် ၄း၁၆-၁၇။ အန္တိခရစ်ပေါ်လာရန်အခွင့်ပေးလျက်၊ ၂သက် ၂း၃-၈ နောက်ဆုံးလှည့်ဖျားခြင်းသည် ရောက်လာလိမ့်မည်။ ၂သက် ၂း၁၁။ လု ၁၈း၈။ ၂တိ ၃း၁-၅။
(၂) ကြွလာတော်မူခြင်း၏ ဒုတိယပိုင်းတွင်မူ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဤကမ္ဘာမြေ ကြီးသို့ပြန်လည်ဆင်းသက်လျှက် ထိုအဖြစ်ကိုလည်း မျက်စေ့ဖြင့်မြင်ကြရမည်။ ဗျာ ၁း၇။ ကြီးစွာတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းဖြင့် မြင်ကြရမည်။ မ ၂၄း၂၆၊ ၂၇။ ကြီးစွာသော ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်ကိုဆောင်လျှက်ကြွလာမည်။ မ ၂၄း၃၀။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန်ကျမ်း ချက်များ။ ယော ၁၄း၃ နှင့် မ၊ ၂၅း၃၁-၃၂။ ၁သက်၊ ၄း၁၆-၁၇ နှင့် ဇာခရိ၊ ၁၄း၎-၅။
မှတ်ချက်။ ဤကြွလာတော်မူခြင်းပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်းတို့အကြားတွင်ကြား ကာလ ရှိ နေကြောင်းမှာ မေးမြန်းရန်ပင်မလိုတော့ပါ။ ထိုကာလနှစ်ခုအကြားတွင်သားရဲ (သို့မဟုတ်) အန္တိခရစ်၏ပေါ်လာခြင်းနှင့် အုပ်စိုးခြင်း။ ဗျာ ၁၃း၁-၅။ ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်၊ ၁ကော ၅း၁၀။ အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲ (ဗျာ၊ ၁၆း၁၄-၁၆)စသည်များသည် ထိုပထမနှင့်ဒုတိယတို့၏အကြားတွင်နေရာယူပါသည်။
၅။ ပါဝင်မည့်တန်ခိုးတော်များ။ ။ သခင်ဘုရားသည် မိမိပိုင်ဆိုင်သောတန်ခိုးတော်များထဲမှာ ကြီးစွာသော တန်ခိုး အာဏာတို့ကို ပြသမည့်အခွင့်အရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာထဲတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိပါသည်။
(က) သေလွန်သောသူတို့အထဲမှ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် စေသည့်တန်ခိုးတော်၊ ၁သက် ၄း၁၆။ ၁ကော ၁၅း၅၂။
(ခ) အနိစ္စတရားဖြစ်သောအစဉ်ပျက်စီးသောနိယာမကိုဖျက်ဆီးလျှက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကို မပျက် မစီးတတ်သော ကိုယ်တော်၏ ခန္ဓာတော်နှင့်တူစေခြင်းငှာ ချက်ချင်းတခဏချင်းတွင်ပြောင်းလဲမည့် တန်ခိုးတော်။ ဖိ ၃း၂၁။ ၁ယော ၃း၂၊ ၁ကော ၁၅း၅၁-၅၂။
(ဂ) မြေကြီး၏ ဆွဲငင်ခြင်းနိယာမတရားကိုဖျက်ဆီးမည့်တန်ခိုးတော် ကိုယ်တော်အား မိုးတိမ်ပေါ်၌ တွေ့ဆုံရန် မိုးတိမ်သို့တက်ကြရမည်။ ၁သက် ၄း၁၇။ ထိုခဏချင်းတွင်သန်းနှင့်ချီ၍မိုးတိမ်သို့တက် ကြမည်။
(ဃ) မြေကြီးနိုင်ငံတို့နှင့်တပ်များ ဖျက်ဆီးမည့်တန်ခိုးတော်။ ဒံ၊ ၂း၃၄။ ၃၅။ ၄၄း-၄၅။ ဆာ၊ ၂း၈-၉။ ဗျာ ၁၉း၁၅-၂၀။
(င) စာတန်ကိုဘမ်းဆီးချည်နှောင်၍သားရဲ(သို့မဟုတ်) အန္တိခရစ်အားအနိုင်ယူမည့်တန်ခိုးတော်။ ဗျာ ၂၀း၁-၃။ ၂သက် ၂း၈။ ဗျာ၊ ၁၉း၁၉-၂၀။
(စ) အဆုံးသတ်စေသော တန်ခိုးတော်
(၁) တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ အုပ်စိုးခြင်းကို အဆုံးသတ်စေခြင်း၊ ရော ၁၁း၂၅။ တ ၁၅း၁၄-၁၇။ လောကီနိုင်ငံများသည် ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်၏နိုင်ငံဖြစ်လာမည်။ ဗျာ ၁၁း၁၅။ ဇာ ၉း၁၀။
(၂) သားရဲတို့၏ဆိုးသွမ်းခြင်းအပါအ၀င်ကမ္ဘာလောကကြီးရှိ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကို ဖယ်ရှားအဆုံးသတ်စေသောတန်ခိုးတော်။ ဟေရှာ ၁၁း၂-၁၀။ ရော ၈း၁၉-၂၂။
(၃) စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းကို အဆုံးသတ်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့် အုပ်စိုးခြင်းကိုတည်ထောင်လျှက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူစံနစ်ကိုဖျက်သိမ်းမည်။
ဟေရှာ ၅၅း၁၃။ ၃၅း၁-၂။ ၆၅း၂၅။ ၉း၆-၇။
ဆာ၊ ၂း၈-၉။ ဇာ၊ ၁၄း၉။ ဟေရှာ ၂း၎။
ဗျာ၊ ၂၀း၎။ ဟေရှာ ၁၁း၉ ၂း၎။ ၉း၇။
၆။ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ချက်များ။
(က) သခင်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြန်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ၁သက် ၄း၁၆။
(ခ) သခင်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တော်နှင့်တူစေရန် တခဏ ချင်းတွင် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပေးမည်။ ၁ကော ၁၅း၅၀-၅၃။ ဖိ ၃း၂၀-၂၁။ ယော ၃း၂။
(ဂ) ခရစ်တော်၌ သေလွန်ပြီးသောသူတို့သည် မပျက်မစီးနိုင်သော ကိုယ်ခန္ဓာ၊ မပုပ်မပျက်နိုင်သော ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် သေခြင်းမှ ထမြောက်ကြရမည်။ ၁ကော ၁၅း၄၂-၄၄။ ၅၁-၅၇။
(ဃ) ကိုယ်တော်နှင့် တွေ့ဆုံရန် အာကာသကောင်းကင်မိုးတိမ်ထဲသို့ ချီဆောင်ခြင်းခံရလျှက် ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လက်ခံသိမ်းဆည်းမည်။ ၁သက် ၄း၁၇။ ယော ၁၄း၎။
(င) ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကို ၀င်စားလျှက် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲနေကြ ရမည်။ ၂ကော ၅း၈။ ဖိ ၁း၂၃။ ရော ၈း၁၇း၁၈။
(စ) ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်း အကျိုးအပြစ်ကို ပေးတော်မူလတံ့။ ၂ကော ၅း၁၀။ ၁ကော ၃း၁၃-၁၅။ ၂တိ၊ ၄း၈။ ၁ပေ ၅-၄။ ကော ၃း၂၄-၂၅။ ရော ၁၄း၁၀-၁၃။
(ဆ) ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်သတို့သားနှင့် ဆုံစည်းခြင်းအခွင့်ရကြပါမည်။ ဧ၊ ၅း၂၃-၃၂။ ဗျာ ၁၉း၇-၉။
(ဇ) ခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာလောကသို့ ပြန်လည်ဆင်းသက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် အတူဆင်းသက်ကြရမည်။ ယုဒ-၁၄။ ကော ၃း၎။ ဗျာ ၁၉း၁၄။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူများ အဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမည်။ ၂သက် ၁း၁၀။
(ဈ) ကိုယ်တော်နှင့်အတူမြေကြီးပေါ်တွင် အနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံကြရမည်။ ဗျာ ၅း၁၀။ ၂၀း၎-၆။
(ည) ဤ ကောင်းကင်ဟောင်းနှင့် မြေကြီးဟောင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးသောအခါ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်တွင်စိုးစံနေထိုင်ကြရမည်။ ဗျာ၊ ၂၁း၁-၄။ ၂ပေ ၃း၁၀။
၇။ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာ ပြည့်စုံရမည့်အချိန်။ ခရစ်တော်တစ်ဖန်ကြွလာတော်မူမည့်အချိန်နာရီကို မည်သူမျှ မသိရသောအခွင့်မရှိ။ တ ၁း၇။ မ ၂၄း၃၆။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ခရစ်တော်သည်အချိန်မရွေးကြွလာတော် မူနိုင်သည်ဟု သေချာပေါက်ယုံကြည်လျှက် အစဉ်အသင့်ပြင်ထားရန်ယုံကြည်သူတို့အား တိုက်တွန်းထားပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကြွလာတော်မမူမှီဖြစ်ပေါ်လာမည့်နိမိတ်လက္ခဏာများကို အတိအကျဖော်ပြ ထားပါသည်။
(က) ကမ္ဘာလောကကြီးသည် “ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိပြီး၊ လုံခြုံမှုရှိနေသည်”ဟုပြောဆိုနေသောအချိန်။ ၁သက် ၅း၃။ ယေရမိ ၆း၁၄။
(ခ) လူတို့သည် ခရစ်တော်ကြွလာမည်ဟုမမျှော်လင့်သောအခါ (သို့မဟုတ်) ပြင်ဆင်ထားခြင်းမပြုသော အခါ။ ၁သက် ၅း၂။ ၂ပေ ၃း၃-၉။
(ဂ) မြေကြီးပေါ်တွင် သဘာဝဘေးဒါဏ်ကြီးများကျရောက်လျှက်၊ လူမှုဒုက္ခအပေါင်းသက်ရောက်နေချိန်။ လု ၂၁း၂၅။
(ဃ) မြေကြီးပေါ်တွင် ဖြစ်ပျက်သောအကြောင်းအရာများကြောင့်လူတို့သည် ကြောက်လန့်၍ စိုးရိမ် ကြောင့်ကြခြင်းဖြစ်သောအခါ။ လု ၂၁း၂၅-၂၆။
(င) နောဧလက်ထက်၌ ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရကိုဖျက်ဆီးသောကာလ၌ ကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ထို့ထက်ဆိုး၍ လူတို့သည် သတိမမူဖြစ်နေကြသောအခါ၊ လု ၁၇း၂၆-၃၀။ ထိုနေ့ရက်ကာလများ၏ လက္ခဏာများမှာ စည်းစောင့်ခြင်းမရှိဘဲအရက်သေစာအလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်း၊ ရောင်းလျှက်၊ ၀ယ်လျှက် ရှိနေခြင်း၊ ထိမ်းမြားပေးစားလျှက်ရှိနေခြင်း။ ကာမ တဏှာလွန်ကဲခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်း။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်း။ ဘုရားသခင်အား ပုန်ကန်ခြင်းစသည်များဖြစ်ပါသည်။
(စ) စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် နည်းပါးလျှက်၊ မြေကြီးပေါ်တွင် အတုအယောင် ကိုးကွယ်မှုများ နေရာအနှံ့အပြားတွင်ပေါ်ပေါက်မြင်တွေ့နေရသောအခါ။ လု ၁၈း၈။ ၂တိ ၃း၁-၅။ ၁တိ ၄း၁။ ၂ပေ ၂း၁။
(ဆ) ဘုရားသခင်ချိန်းချက်တော်မူထားသောအချိန်ကျရောက်သောအခါ၊ မ၊ ၂၄း၃၆။ တစ်ပါးအမျိုးသား တို့၏ ကာလသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သောအခါ။ လု ၂၁း၂၄။ တ ၁၅း၁၄။ “တစ်ပါးအမျိုးသား တို့ဝင်လာခြင်းပြည့်စုံသောအခါ” ရော ၁၁း၂၅။ ဤကာလနှင့် အသင်းတော်အတွက် ဘုရားသခင်၏ အကြံတော်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်အကောင်အထည်ပေါ်လာသောအခါ။
ဧ ၃း၁၀-၁၁။ ၁း၁၀-၁၄။
၈။ နိဂုံး။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုရမည်နည်း။
(က) ကိုယ်တော်ကြွလာတော်မမူမီတိုင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှက်နေလော့။ လု ၁၉း၁၃။
(ခ) တည်ကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မရွေ့မလျော့ မတိမ်းမယမ်းဘဲနေလော့။ ၁ကော ၁၅း၅၈။
(ဂ) ကိုယ်တော်ကြွလာတော်မူမည်ဖြစ်၍ သက်သာခြင်းရှိလော့။ ၁သက် ၄း၁၈။
(ဃ) အိပ်မပျော်ဘဲ သမ္မာသတိရှိ၍ စောင့်လျက် နေလော့။
၁သက် ၅း၆။ မ၊ ၂၄း၄၂။
(င) ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေလော့။ ၁ယော ၃း၃။
(စ) အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်သေးသူဖြစ်လျှင် -
(၁) သခင်ဘုရားနှင့် တွေ့ဆုံရင်ဆိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါ။ အာမုတ် ၄း၁၂။
(၂) ပြက်ရယ်ပြုခြင်းကို ယခုပင် ရပ်ဆိုင်းလော့။ ၂ပေ ၃း၃-၄။
(၃) တွေ့နိုင်သောကာလတွင် ကိုယ်တော်ကိုရှာလော့။ ဟေရှာ၊ ၅၅း၆။
(၄) ကိုယ်တော်ကြွလာတော်မူမည့်အချိန်အတွက် ပြင်ဆင်လျှက် အစဉ် အသင့် စောင့်နေ လော့။ မ၊ ၂၂း၄၄။
သခင်ယေရှု၊ ကြွလာတော်မူပါ။ အာမင်။ ဗျာ ၂၀း၂၀။
၁။ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာနှင့် အသင်းတော်အား ချီဆောင်ခြင်းတိှု့နှစ်ခုသည်မတူညီခြားနားကြောင်းကို ၀ါကျတစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းဖြင့်ဖြေပါ။
၂။ ခရစ်ယာန်များ၏မျှော်လင့်ရာနှင့် လူဆိုးတို့၏ မျှော်လင့်ရာကို အတိုချုပ်ခွဲခြားပြပါ။
၃။ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာ၏ ခိုင်လုံမှုကို အထောက်အထားပြုသောအချက် (၆)ချက်အနက် (၄)ချက်ကို မှတ်မိသလိုရေးပြပါ။
၄။ ဧ၀ံဂေလိဝမ်းမြောက်ဘွယ်ရာကျမ်းများတွင် ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းနှစ်ကြိမ်နှင့် ပတ်သက်၍ ခြားနားစွာ ဖော်ပြထားပုံကို ရှင်းပြပါ။ ကျမ်းညွှန်းဖော်ပြပါ။
၅။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်ဒုတိယ အကြိမ်ကြွလာခြင်းမဟုတ်ပါသနည်း။
၆။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာအား ပေးထားသောအမည် (၆)မျိုးအနက် (၄)မျိုးကို ဖော်ပြပါ။
၇။ အဘယ်ကြောင့် ထိုမင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာကို “အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်း”ဟု ခေါ်ပါသနည်း။
၈။ မည်သည့်အကြောင်းအချက်ကြီး (၂)ရပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ရာကို ကျောက်ဆူးကဲ့သို့ ခိုင်ခံ့စေ ပါသနည်း။
၉။ ယုံကြည်သူများကြိုးစားရယူနိုင်သော သရဖူ (၅)မျိုးကို ရေတွက်ပါ။
၁၀။ အောက်ပါသရဖူများသည် မည်သူများအတွက် သီးသန့်ထားပါသနည်း။
(က) ဓမ္မသရဖူ၊ ၂တိ ၄း၈။
(ခ) ၀ါကြွားခြင်း၏ သရဖူ။ ၁သက် ၂း၁၉။
၁၁။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာ၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာ (၃)မျိုးကို ဖော်ပြပါ။
၁၂။ ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူသောအခါ အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါဝင်ကြောင်း ကျမ်းညွှန်းများပြလျှက်၊ အဘယ်ကြောင့် ထိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင်ကြားကာလရှိရကြောင်းဖော်ပြပါ။
၁၃။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာကြောင့် သခင်ဘုရားအနေဖြင့် မိမိ၏တန်ခိုး အာဏာ၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကိုပြသရန် အခွင့်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအခွင့် (၆)ခုအနက် (၃)ခု တို့ကို ကျမ်းညွှန်းတို့ဖြင့်ရှင်းပြပါ။
၁၄။ ဤသင်ခန်းစာ၏ စာပိုဒ်နံပါတ် (၆)တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာရှိသောမျှော်လင့်ရာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ကြုံရမည့် အချက် (၁၀)ချက်ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ သတ်မှတ်မိသည့်အစဉ်အတိုင်း ရေးပြပါ။
၁၅။ ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာတော်မမူမီ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်လာမည့် လက္ခဏာ(၇)ခုကို ဖော်ပြထားရာ ၄င်းတုိ့ အနက် (၅)ခကိုကျမ်းညွှန်းများဖြင့် ဖော်ပြပါ။
၁၆။ ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ရာကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သင်ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများကို အတိုချုံး ရေးသားပြီး၊ ယုံကြည်သူ မယုံကြည်သူတို့အား သင်မည်ကဲ့သို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြ ပါ။
အမည်။ ____________________________ ရက်စွဲ။ ________________________
လိပ်စာ ။ ____________________________